ပူပြင်းလှတဲ့နွေရာသီမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပူပြင်းလှတဲ့နွေရာသီမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်စေဖို့
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကြောက်ရွံ့နေကြချိန်မှာ ပူပြင်းလာတဲ့ နေကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ အပူကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ နွေရာသီကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပါ။
တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက်ပဲ လမ်းလျှောက်တဲ့ အသင့်အတင့်လေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်တာကတောင်မှ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးများပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ရင်သား၊ အူမကြီး၊ ဆီးကြိတ်၊ အဆုတ်နဲ့ ဆီးပြွန်ကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အသင့်အတင့်ရှိတာက သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တွေကို ကျန်းမာတဲ့ပမာဏမှာ ထိန်းထားပေးပြီးတော့ အရိုးပွခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို လျောကျစေရုံသာမက နှလုံးနဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ပြီးတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာက အသက်ကြီးလာရင် သတိမေ့တာတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းက အားဆေးတွေထက်တောင် ကောင်းပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စမရှိရင် ဖြည်းဖြည်းချင်း စလုပ်ကြည့်ပါ။ တစ်ကြိမ်ကို ၅-၁၀ မိနစ်လောက်ကစလုပ်ပြီးတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာတဲ့အထိ တိုးလုပ်ကြည့်ပါ။ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀၊ တစ်ပတ်မှာ ၆ ရက်လောက် လုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ အိမ်နားဝန်းကျင်မှာ၊ ပန်းခြံထဲမှာ မိနစ် ၃၀ လောက် လမ်းအမြန်လျှောက်ပေးတာကတောင်မှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုရစေပါတယ်။
2. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လန်းဆန်းစေတဲ့ အစားအစာတွေ စားပါ။
နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုများတဲ့အခါမှာ အသားအရေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒီတော့ စားတဲ့အစားအစာထဲမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ ပြည့်ဝနေဖို့ အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ ချဉ်ဖြုန်းသီး၊ ဘယ်ရီသီးတွေပါအောင် စားပေးပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးကို ချက်စားရင်တွေ့ရတဲ့ lycopene ဆိုတဲ့ဓာတ်က ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးပြီးတော့ အရေပြားကို နေလောင်ဓာတ်နဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3. ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာရင် စနစ်တကျ တိုက်ထုတ်ပါ။
နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုများတဲ့အခါမှာ လက်တွေ၊ နောက်ကျောတွေ၊ ရင်ဘတ်တွေနဲ့ မျက်နှာတွေပေါ်မှာ ကြည့်ရဆိုးတဲ့ဝက်ခြံတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေကို မကြာခဏဖယ်ရှားပေးပါ (exfoliate)၊ salicylic acid ပါတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးရည်နဲ့ သစ်ပေးပါ။ tea tree oil, နနွင်းပါတဲ့လိမ်းဆေး လိမ်းပေးပါ။
ပူတဲ့အခါမှာ အဆီတွေနဲ့ချွေးတွေ ပိုထွက်တတ်လို့ အဆီမပြန်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ရွေးသုံးပါ။
4. ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေကို ကာကွယ်ပါ။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ လွန်ကဲစွာ ထိတွေ့မိတဲ့အခါမှာ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကို များစေပါတယ်။
ဒီတော့ အပြင်ထွက်တဲ့အခါတွေမှာ -
● ပွပွချောင်ချောင် ချည်ထည်အင်္ကျီတွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။
● SPF 30 နဲ့အထက် ပါဝင်တဲ့ နေကာခရင်မ်လိမ်းပါ။
● မျက်လုံး၊ နှာဖူး၊ ဦးရေပြား၊ နားနဲ့ နှာခေါင်းတွေလုံဖို့ ဦးထုပ်ဘေးပြားကြီးကြီး စောင်းပါ။ ထီးဆောင်းပါ။
● မျက်လုံးနဲ့ဘေးနားက နူးညံ့တဲ့အသားလေးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို 99% ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နေကာမျက်မှန်တပ်ပါ။
● ရေဘူးဆောင်ပါ။ ရေ လုံလုံလောက်လောက် သောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် ဓာတ်ဆားရည်သောက်ပါ။